जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Kohalpur Trends
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
fb sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonemail sharing button
काठमाडौं:-“जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न नसके स्वरुप एक सेयर अबश्य गर्नु होला” जिन्दगीमा एकपटक पुग्नै पर्ने मन्दिर ,सायद भन्दा खेरी हजुर हरुलाई बिश्वास लाग्दैन होला, तर यस मन्दिरमा आयर मागेको वर पूरा हुने बिस्वाश गरिन्छ।बारीपारी घना जंगल, ३ नदीको संगम अनि बिचमा मनै लोभ्याउने मन्दिर । यो तस्वीर हो गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ आँपचौरमा रहेको कोटेश्वर महादेव मन्दिरको । उक्त मन्दिरमा पुग्दा मनै आनन्द हुन्छ । तर उचित प्रचारप्रसार हुन नसक्दा आझेलमा परेको छ ।
The submit जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! (भिडियो हेर्नुहोस्) appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: कोभिडको मारमा ‘काँठ अर्थतन्त्र’
Next Next post: द्वन्द्व पीडितको न्यायमा संजालको जोड